IMac Pro ayaa hadda laga heli karaa qaar ka mid ah dukaamada Mareykanka wax ka yar $ 4.999 | Waxaan ka socdaa mac
IMac Pro ayaa hadda laga heli karaa qaar ka mid ah dukaamada Mareykanka wax ka yar $ 4.999
Ka dib kharashaadka ciidaha Kirismaska ​​ay galaan, shandadeena iyo beerkeena labadaba, iibka ayaa bilaabmaya. Nasiib darrose Apple waligeed laguma sifeynin inay bixiso nooc kasta oo qiimo dhimis ah, midna inta lagu jiro taariikhda iibkan ama inta lagu jiro Jimcaha Madow, sidaa darteed haddii aan dooneyno inaan dalab ka raadino Apple waa inaan u baahanahay iibiyeyaal idman.
Wax soo saarkii ugu dambeeyay ee ay shirkaddu billowday, oo aan weli ka hadlayno ku dhowaad bil kadib markii ay daah furtay, iMac Pro, waa ujeedo ay rabaan isticmaaleyaal badan, dadka isticmaala ee raadinaya dalab ku saabsan badeecadan si loo badbaadiyo in yar euro, iyo iskuna day inaad soo kabso qayb kamid ah maalgashiga la sameeyay ku xaraashka agabka internetka.
Isbaanishka wali wali waa xilli hore in iMac Pro lagu helo qiimo dhimis. Intaas waxaa sii dheer, waa wax soo saar qiimo aad u sareeya u yahay iible kasta inuu fursad u helo inuu hoos u dhigo, wax aysan waligood sameynin. motu u gaar ah cad, tan iyo Apple had iyo jeer waa ka dambeeya noocan ah dalabyada.
Laakiin gudaha Mareykanka, gaar ahaan BestBuy, waxaan horeyba uga heli karnaa xarumaha ugu horeeya ee bixiya iMac Pro qiimo dhimis $ 250, marka qiimaha ugu dambeeya iyo canshuuraha iMac Pro, nuqulkiisa aasaasiga ah, waxay maraysaa $ 4.799 oo lagu daray canshuuro, Qiimo aan ka goyn karno qiimaha agabyada aan xaraashka ku leenahay eBay, marka ugu dambeysa maalgashiga ugu dambeeya ee lagu raaxeysto bahalkan wuxuu noqonayaa ku dhowaad $ 4.000, oo iska cad.
Waxay kaloo na siisaa fursad aan ku ku raaxayso iMac Pro $ 4.511 oo lagu daray cashuur, laakiin waa in lagu xisaabtamo in qaabkani yahay aalad leh sanduuq furan, ama sababta oo ah waxay ka timid soo noqosho ama in loo adeegsaday sidii bandhig. Xitaa sidaa oo ay tahay, oo haddii aadan ahayn qof waalan oo ku saabsan urta alaabooyinka cusubi bixiyaan, gaar ahaan kuwa Apple, waxay noqon kartaa ikhtiyaar ka xiiso badan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » IMac Pro ayaa hadda laga heli karaa qaar ka mid ah dukaamada Mareykanka wax ka yar $ 4.999
WD My Cloud Home, Falanqaynta NAS Hashle-Bilaash ah